Jiilka: Sanduuqa Saamiga ee Sinnaanta
Mawduuca: Gaadiid nadiif ah, Hufnaanta Tamarta, Tamarta La cusboonaysiin karo, Farsamada
Maareynta Maalgashiga Guud waxay u arkaan inay sii wadi karto inay noqoto mid muhiim u ah dhaqaalaha caalamiga ah ee cusub. Iyo tan iyo maalgashadeena bilawga ah waxa ay ahayd sanduuqa ugu fiican ee xisaabtanka ee McKnight.
$ 25 milyan ayaa ka soo jeeda 2014
$ 50 milyan ayaa lagu daray 2017
$ 50 milyan oo lagu daray 2018
Jiilka waxay sahamisaa fursadaha dhaqaale ee ka soo baxa meeraha adigoo cadaadis saaraya, isbedelka isbeddelka sida kobcinta magaalooyinka, biyaha yaraanta, iyo qasabta in la joojiyo isbedelka cimilada. Waxay cadeeyneysaa shirkadaha si wanaagsan loo maareeyo, oo si fiican u qiimeeya, kuwaas oo mustaqbalka ku hagaagi doona. Tani waxay ahayd kormeerkii ugu horreeyay ee "saameynta" si aan ugu qalinjabinno qoondeyn buuxda oo ku saabsan hannaanka.
Soo Celinta Lacagta: Dib u dhiska khatarta ah ee la isku hagaajiyay, khariidadda $ 125 milyan sida Q2: 2018
Saameynta saameynta saameynta barnaamijku wuxuu noqon karaa marxalad loogu talagalay in lagu dhagaysto maareeyayaasha maaliyadeed ee cusub. McKnight "Qalinjabiyay" Nooga soosaaray deeqdeena isugeynaya maalgashadeena.
Jiilka wuxuu wadahadal xiiso leh ku yeeshay maalgashadeyaasha Twin Cities wixii ku saabsan mustaqbalka dhaqdhaqaaqa waari kara. Shaqaalaheena deeq bixiyeyaasha waxay ku biireen maalgashadayaasha waxayna heleen aragti cusub oo ku saabsan fursadaha ganacsi ee dhici doona iyada oo baabuurta korontada iyo kuwa is gaadhsiinaya ay koraan suuqyada suuqa.
Sawir Sawir ah: (Sare) Naqshadaynta Jiilka